एनआइसी एशिया बैंकबाट हजारौं प्रताडित, बैंकर्स संघमा गम्भिर छलफल ! ~ Banking Khabar
एनआइसी एशिया बैंकबाट हजारौं प्रताडित, बैंकर्स संघमा गम्भिर छलफल !
बैंकिङ खबर । एनआइसी एशिया बैंकले ऋणीलाई प्रताडित बनाएको विषयले राष्ट्रिय बहसको स्वरुप लिएको छ । उक्त बैंकले गरेका ठगी तथा ग्राहकप्रतिको ज्यादतीका विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ तथा विभिन्न संघसंस्थामा बहस हुन थालेको छ । एनआइसी एशिया बैंकले चर्को जरीवाना लिएको, पुनरकर्जा नदिएको, लकडाउनको समयमा राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएको सुविधा समेत ग्राहकलाई नदिएको, ऋण तिर्न ढिला भएकाहरुलाई कालो सूचिमा हालीदिने धम्की दिएर बारबार पैसा मागेर तनाब दिएको लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघमा एनआइसी एशिया बैंक विरुद्ध विभिन्न उजुरीहरु परेका छन् । यसअघि बैंकर्स संघमा भएको २ वटा बैठकमा लगातार एनआइसी एसिया बैंकको ज्यादतिका बारे गम्भिर छलफल भएको छ । सो छलफलमा बैंकर्स संघका पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंकिङ क्षेत्रकै बदनाम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एनआइसी एशिया बैंकका कारण बैंकिङ क्षेत्रकै बदनाम भएको भन्दै बैंकरले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पछिल्लो समय एनआइसी एसिया बैंकबाट पीडीत भएकाहरु संगठीत हुँदै गएपछि विषयले ठुलो रुप लिएको हो । उनीहरु संगठीत भएपछि चौतर्फी बैंक बन्द एनआइसी एशिया बैंक विरुद्ध संघसंस्थाहरु नै जुर्मुराएका छन् । बैंकर्स संघ घेराउ गर्न पुगेका पीडीतहरुले ‘एनआइसी एसिया बैंक बन्द गर्नुर्छ भन्दै नारावाजी गरेको बैंकर संघका एक सदस्यले बताए । पीडित समूह बनाएर बैंकर्स संघको कार्यालय घेराउ गरिएपछि घटनाले उग्र रुप लिँदै गएको छ । एनआइसी एसिया बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाहरु ऋणीहरुलाई उपलब्ध नगराएको विषयलाई लिएर बैंकर्स संघमा छलफल भइरहेको छ । पुनर्कर्जा प्रयोग गर्ने विधि बारे बैंकर्स संघमा छलफल भएका बेला सो विषयले प्रवेश पाएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । बैठकमा अधिकाँस समय एनआइसी एसिया बैंकका बारे छलफल भएको थियो ।
ुएनआइसी एसिया बैंकले ज्यादती गरेको विषयमा विभिन्न ठाउँहरुमा उद्योग वाणिज्य संघ विरुद्धमा उत्रिएको छ । त्यसैगरी पर्यटन व्यबसायीहरु, होटल व्यबसायीहरु, यातायात व्यबसायीहरु, विद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाका विभिन्न संगठनहरु प्याव्सन, एनप्याव्सन, अभिभावक संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ ब्यवसायी संघ, सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ जस्ता संस्थाहरु पनि एनआइसी एसिया बैंकले गरेको ज्यादतिका विरुद्धमा छन् । ती संस्थामा आबद्ध भएका कैयौ व्यापारी व्यबसायीलाई एनआइसी एसिया बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत नाम निकाल्ने टर्चर दिँदै आएको भन्दै पीडीतहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।